Portescap dia mampahafantatra ny motera 16DCT vaovao amin'ny motera Athlonix avo lenta avo lenta DCT. Ny motera 16DCT dia afaka manome torolàlana mitohy hatramin'ny 5.24 mNm amin'ny halavany 26mm fotsiny.
Ny 16DCT dia mampiasa andriamby Neodymium mahery sy famolavolana angovo tsy voatanisa ao Portescap. Ny coil miantoka tena manokana dia miantoka ny fahombiazan'ny avo lenta ao anaty fonosana kely, mampihena ny vidin'ny tompony amin'ny ankapobeny. Raha ampitahaina amin'ny motera mitovy amin'izany eny an-tsena, ny 16DCT dia manana ny fibaikoana maotera ambany indrindra (R / K2) izay midika fa manana fidinana ambany kokoa amin'ny hafainganana izy amin'ny fitomboan'ny entana. Ity dia manome ny motera matanjaka indrindra azonao ampiasaina ho an'ny filàna fampiharana sarotra. Io fiasa io, ampiarahina amin'ny fahombiazana hatramin'ny 85%, dia mahatonga ny motera 16DCT ho vahaolana mihetsika mety tsara ho an'ny fitaovana ampiasain'ny bateria.
Ny 16DCT dia misy rafitra fifampiresahana vy sy grafit sarobidy ary mety indrindra amin'ny fampiharana toy ny paompy fitsaboana sy indostrialy, rafitra fanaterana zava-mahadomelina, rafitra robotika (rantsan-tànana bionika), fitaovam-pahefana kely indostrialy, milina fanaovana tombokavatsa, basy mesotherapy, fitaovan'ny nify, fijerin'ny rivotra, ary mpamatsy indostrialy. Fampiharana hafa ao anatin'izany ny fiarovana sy ny fidirana ary ny robot humanoid dia mety hihoatra ny fampiasana ny motera 16DCT Athlonix.
Fotoana fandefasana: Feb-27-2018